ဒူဒူကြီး: CPP - Controllable or Variable Pitch Propeller
သဘေ်ာတွေမှ၊ ရေယက်ပန်ကာဆိုတဲ့၊ Propeller တွေကိုအမျိုးအစား ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ FPP ဆိုတဲ့ Fixed Pitch Propeller နဲ့ CPP ဆိုတဲ့ Controllable or Variable Pitch Propeller ရယ်လို့ တွေ့ရမှာဖြစ်သလို၊ Azimuth Propeller, Vertical Axis Propeller, Paddle Wheels နဲ့ Shrouded Propeller ဆိုတဲ့ Propeller အမျိုးအစားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
CPP Controllable or Variable Pitch Propeller တွေကို၊ သဘေ်ာ အရွယ်အစားပေါါအခြေခံကာ
၁။ Highly Skewed Propeller၊ နဲ့ ၂။ Self Pitching Propellers ဆိုပြီး ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Propeller Pitch
မည်သည့် Propeller အမျိုးအစားမှာမဆို၊ Propeller Blade တွေရဲ့ Pitch Angle စောင်းနေခြင်းကြောင့် သာ၊ သဘေ်ာဟာ ရွှေ့လျားသွားလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Propeller လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ Blade တွေမှ၊ ရေကို အနောက်ဖက်သို့ယက်ထုတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Propeller Blade တွေဟာ၊ Pitch Angle အစောင်းဒီဂရီ တခုမှာ မရှိပဲ "0" ဒီဂရီ အနေအထားနဲ့သာ၊ တတ်ဆင်ထားရင်၊ သဘေ်ာဟာ ရှေ့ ဒါမှမဟုတ် နောက် ကို ရွှေ့လျှားသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
Propeller Blade တွေကို၊ Nut ထဲက Thread အရစ်လို၊ အတွင်းဘက်ရစ်သလို လည်ပတ်တဲ့ပုံစံ တည်ဆောက်ထားတာမို့၊ Screw Propeller လို့အမည်ပေးပါတယ်။ Propeller မှ ရေကိုအနောက်ဖက်သို့ ယက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်၊ နယူတန်ရဲ့တတိယနိယာမ Newton’s Third Law of Motion အရ၊ Thrust Force acting ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ သဘေ်ာကိုရှေ့သို့ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ အလားတူ Propeller ရဲ့ Direction of Rotation ကပြောင်းပြန်လည်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကိုနောက်သို့ ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။
Propeller Blade တွေရဲ့ Pitch Angle အစောင်းဒီဂရီကို၊ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစေပြီး၊ သဘေ်ာကို ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်သို့ ရွှေ့လျှားသွားလာစေတဲ့ Propeller အမျိုးအစားကို Controllable or Variable Pitch Propeller လို့အမည်ပေးသတ်မှတ်ပါတယ်။
Direct Propulsion System မှ FPP ဆိုတဲ့ Fixed Pitch Propeller ကိုကြည့်ရင်၊ Prime Mover အဖြစ်၊ Low Speed2Stroke Engine မောင်းနှင်ရာမှ၊ ရလာတဲ့ လည်ပါတ်မှုကို Propeller Shaft မှတဆင့် ပေးပို့  ပြီး၊ Propeller ကိုလည်ပတ်ပါတယ်။ Propeller လည်ပတ်မှုကြောင့် သဘော်ကို၊ Ahead ဆိုတဲ့ ရှေ့ သို့ ရွှေ့လျားစေပြီး၊ Astern ဆိုတဲ့ နောက်သို့ ရွှေ့လျားစေခြင်တဲ့အခါ၊ Engine ရဲ့ Firing Order ကိုပြောင်း ပြီး၊ မူလလည်ပတ်ရာ Direction မှ ပြောင်းပြန် Reverse Direction ဖြင့် လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့် Propeller ပါ၊ ပြောင်းပြန်လိုက်ပါ လည်ပတ်ကာသဘေ်ာဟာ၊ နောက်ပြန် ရွှေ့လျားပါတယ်။
Prime Mover အဖြစ် High Speed နဲ့ Medium Speed Engine4Stroke Engine တွေသုံးထားတဲ့  သဘေ်ာတွေ မှာတော့၊ Engine ရဲ့ Firing Order ကိုပြောင်းကာ Engine ကို မူလလည်ပတ်ရာ Direction မှ ပြောင်းပြန် Reverse Direction ဖြင့်လည်ပတ်ဖို့မရနိုင်တာကြောင့်၊ Reduction & Reversible Gear Box ခံကာ၊ Gear Box မှတဆင့် Propeller Shaft ရဲ့ လည်ပတ်မှုကနေ Propeller ကို၊ Clock Wise နဲ့ Anti-clock Wise ဘယ် လည်၊ ညာလည်လိုသလို လည်ပတ်စေပါတယ်။
Fig. CPP blades position
CPP - Controllable Pitch Propeller ကို ယေဘုယျအားဖြင့်၊ High Speed နဲ့ Medium Speed Engine4Stroke Engine တွေနဲ့၊ တွဲဖက်ကာတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Prime Mover မှရလာတဲ့ လည်ပါတ်မှု Revolution ကို၊ Reduction Gear Box မှလျှော့ချပြီး၊ Reversible Gear Box မှတဆင့်၊ Propeller Clock Wise နဲ့ Anti-clock Wise လည်ပတ်စေခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါဘူး။
Propeller Hub သို့မဟုတ် Boss ပေါါမှာထိုင်ထားတဲ့ Propeller Blade တွေရဲ့ Pitch Angle Position ကို၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သာ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Pitch Angle Position ကို Hydraulic System တွေနဲ့ Automation System တွေကို၊ အသုံးပြုကာ Propeller Shaft ထဲမှ တဆင့် Linkage တွေ၊ Piston တွေ၊ Gear Mechanism တွေကိုသုံးပြီး၊ Proportional and Directional Solenoid Valve တွေမှတဆင့် Propeller Blade တွေရဲ့ Pitch Angle ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. CPP - Servo cylinder integrated in propeller hub
Fig. CPP - Servo cylinder built on the gear box
Main Engine ရဲ့ Output Power ကို Propulsion အတွက်သာမက Power Generation အတွက်ပါ အသုံးပြုဖို့ CPP System ကိုတတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ CPP System ကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ အတွက်၊ Main Engine ရဲ့ Revolution RPM ဟာ Rated RPM တစ်မှာ Fixed ဖြစ်နေပြီး၊ သဘေ်ာရွှေ့ လျား သွားလာမှုအနှေး၊ အမြန် Speed နဲ့ ရှေ့တိုး၊ နောက်ဆုတ် Ahead & Astern မောင်းနှင်မှုတွေ အတွက် Engine RPM လိုက်ပါပြောင်းလဲပေးရန်မလိုအပ်ခြင်း၊ Prime Mover ဟာ4Stroke Engine ဖြစ်ခဲ့ ရင်၊ Reversible Gear Box ခံကာ Propeller ရဲ့ Direction of Rotation ကို ပြောင်းလဲပေးရန် မလိုအပ် ခြင်းနဲ့၊ Prime Mover က2Stroke Engine ဖြစ်ခဲ့ရင် Firing Order ပြောင်းကာ Propeller ရဲ့ Direction of Rotation ကို ပြောင်းလဲ ပေးရန်မလိုအပ်ရခြင်းစတဲ့အားသာချက်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
အကယ်၍ အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် Hydraulic System Failure ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ Blade တွေရဲ့ Pitch Angle Position ကိုပြောင်းလဲမသွားအောင် Locking Device နဲ့ဖမ်းထားပါတယ်။ အချို့ CPP System တွေမှာ (၁၅) စက္ကန့်မှ (၄၀) စက္ကန့်အတွင်း၊ Maximum Thrust Force Action ကိုရနိုင်တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
CPP System တတ်ဆင်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ FPP ဆိုတဲ့ Fixed Pitch Propeller System တတ်ဆင် ထားတဲ့ သဘေ်ာ တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်၊ မောင်းနှင်ရွှေ့လျားမှာမှာ၊ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ FPP System မောင်း နှင်လာတဲ့ Navigator တွေကို CPP System နဲ့ မောင်းနှင်ခြင်းကို မေးကြည့်တဲ့အခါ၊ CPP System ဟာ ပိုမိုသက်သာလွယ်ကူတယ်လို့ဖြေကြပြီး၊ Reliable ဖြစ်ပေမယ့်၊ Response မြန်တဲ့ အတွက် သတိတော့ထား ရတယ်လို့လည်းဖြေကြပါတယ်။
FPP System တွေမှာတော၊့ Main Engine နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မောင်းနှင်တာမို့၊ Navigator ဟာ Ahead မှာ၊ Dead Slow Ahead, Slow Slow Ahead, Half Ahead, Full Ahead စသည်ဖြင့် Engine RPM ကို အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်စေဖို့၊ Engine Telegraph System ကတစ်ဆင့် Engine Room ကို ဆက်သွယ်ကာ၊ Movement Order ကိုပေးသလို၊ Astern မှာလည်း အလားတူ Movement Order ကိုပေးရပါတယ်။
CPP System မှာတော၊့ Main Engine RPM ဟာ Fixed ဖြစ်နေပြီး၊ Bridge သို့မဟုတ် Wheel House မှ Navigator ဟာ၊ Movement အတွက်၊ လိုအပ်သလို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပြီး၊ Pitch Angle Percentage (20 %), (35 %), (50 %), (80 %), (98 %) စတဲ့၊ အခေါါအဝေါါတွေနဲ့ Ahead နဲ့ Astern မှာ၊ သုံးနှုံးပါတယ်။ ရေကြောင်းလမ်းပြ Pilot တွေကတော့၊ သဘေ်ာမှာ CPP System တတ်ထားပေ မယ့်၊ အသုံးများတဲ့ FPP System မှ၊ အခေါါအဝေါါတွေနဲ့သာ Dead Slow, Slow, Half, Full စသည်ဖြင့်၊ Movement Order ကိုသာပေးတတ်တာမို့၊ Pitch Percentage နဲ့ Movement ကို Convert ပြန်လုပ်ကာ (20 %) ဆိုရင် Dead Slow, (35 %) ဆိုရင် Slow, (50 %) ဆိုရင် Half စသည်ဖြင့်၊ ရေးမှတ်ထားရ ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရတော၊့ သဘေ်ာရဲ့ ကုန်တင်ဆောင်ထားတဲ့အနေအထား နဲ့ Main Engine ရဲ့ Load ပေါါမူတည်လို့ Full Speed Away နဲ့ ပင်လယ်ပြင် At Sea မှာ CPP ကို Pitch Angle (100 %) အ
Main Engine ရဲ့ အနေအထား၊ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ကာ မောင်းနှင် ကြရပါတယ်။ Exhaust Gas Temperature တွေတက်လာတာတို့၊ Main Engine Fresh Water Cooling System/ Main Engine Jacket Cooling System မှာTemperature တက်လာတာတို့၊ Unit တစ်လုံးခြင်းစီက Fuel Pump တွေရဲ့ Fuel Rack တွေ Load ဝင်နေတာတို့၊ Governor Load Indicator ကအချက်ပေးလာတာလို့စတဲ့ Main Engine မှာ Over Load ဖြစ်တဲ၊့ အနေအထား သက်ေတတွေကို တွေ့လာရင်၊ CPP ရဲ့ Pitch Percentage ကိုလျှော့ချကြပါတယ်။
တကယ်တော့ CPP System ဟာ FPP System နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်၊ အားသာချက်တွေရှိပေမယ်၊ Propeller Boss ထဲက Seal တွေ Leak ဖြစ်တဲ့အခါ၊ Hydraulic ပိုင်းနဲ့ Control ပိုင်းတွေ Malfunctioning နဲ့ Failure ဖြစ်တဲ့အခါ၊ ပြုပြင်ရတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်က၊ ကြီးသလို၊ System ကလည်း ရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 02:46